Gastritis – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” အရေးပျေါဖုနျး “
ဖုနျးမွညျသံကွောငျ့ ဒေါကျတာစိုးတဈယောကျ လနျ့နိုးသှားသညျ။အခြိနျကွညျ့လိုကျတော့ မနကျ ၂နာရီ၊ ဖုနျးချေါနသေူက ညီမဝမျးကှဲဖွဈသူ မျီးငယျ…..။ ရုတျတရကျစိတျပူသှား..မကျြလုံးပငျကယျြသှားသညျ။ ဟုတျတယျလေ…ဒီအခြိနျကွီး ဖုနျးချေါတယျဆိုတော့..ဘယျသူမြား ဘာမြားဖွဈလဲပေါ့…။
” ဟဲလို “…
” ဟယျလို ကိုကွီးရေ…ကယျပါဦး… ”
” မီးငယျ…သမီး…ဘယျသူဘာဖွဈလို့လဲ ?”
” ကိုကွီး…သမီးရငျခေါငျးထဲက တအားပူနလေို့….လပှေသလိုကွီးလညျးဖွဈနတေယျ…ညနတေညျးကရငျ ဖွဈနတော…ခုပိုဆိုးလာပွီး အိပျမရဖွဈနလေို့ ”
” မကွေီးနဲ့ဖကွေီးက ခရီးသှားနလေို့…လူကွီးမရှိတာနဲ့ ဆေးခနိးလညျးမသှားပွဖွဈဘူး…ဆေးကတော့ လကျြဆားပဲစားထားတယျ..အစာမကဘြေူးထငျလို့…အဲ့ဒါလညျးမသကျသာပါဘူး ”
” အခွားရော..အနျတာ..ဝမျးသှားတာ…ဖြားတာ…အခွားဘာဖွဈသေးလဲ? ဘာတှစေားလဲ ဒီရကျပိုငျး? အခဉျြအစပျ လမျးဘေးစာတှစေားသေးလား?အစားမမှနျတာမြိုးရော ”
” အဲ့လိုတှတေော့မဖွဈဘူးကိုကွီး….ဒီရကျပိုငျး အပွငျစာတှတေော့မစားဘူး။စာမေးပှဲရှိလို့ စာကကျြရငျး အိပျခငျြပွအေောငျ သရကျသီးနဲ့အစပျတှတေော့စားလိုကျမိတယျ…ထမငျးတော့သိပျမစားဖွဈဘူး”
” အငျး…ကွညျ့ရတာ အစာအိမျရောငျတာဖွဈနိုငျလိမျ့မယျ…ကိုကွီး အဘှားအတှကျလုပျပေးထားတဲ့ ဆေးသတ်ေတာလေး သိတယျမလား? အဲ့ထဲမှာ Kremil – S ပနျးရောငျရှိတယျ။ အဲ့ဒါလေး ၂လုံးလောကျဝါးစားလိုကျ…”
” ဝါးစားရမှာလား? ”
” ဝါးစားတာပိုကောငျးတယျ…မခါးဘူး…ခြိုခြိုလေးပဲ…။အဲ့ဒါသောကျပွီး ခဏနရေငျ သကျသာသှားလိမျ့မယျ…မသကျသာရငျ ဖုနျးပွနျဆကျလာ…. ကိုကွီးလာခဲ့မယျ…ဟုတျပွီလား? ”
ဖုနျးခသြှားပွီးတညျးက မနကျထိ ဖုနျးထပျမချေါလာပုံထောကျရငျ..သကျသာသှားပွီထငျ့ ။ဖုနျးတော့ ဆကျကွညျ့ဦးမှ…
“ဟဲလို ကိုကွီး ”
“ဟုတျ ကိုကွီး…ကိုကွီးပွောသလို Kremil-S ပနျးရောငျ ၂လုံးဝါးစားလိုကျတယျ..အဲ့ဒါပွီး ခနနတေော့ အတျောလေးသကျသာသှားပွီး အိပျပြျောသှားတာ…အဲ့ဆေးက ဘာတှပေါတာလဲကိုကွီး…တျောတျောကောငျးတယျနျော…ခါးလညျးမခါးဘူး….ခြိုခြိုလေးရယျ…”
” ဟုတျပ…အဲ့ Kremil S ပနျးရောငျက အတျောလေးကောငျးတယျ…ကိုကွီးကိုယျတိုငျလညျး သောကျဖူးတယျ..လူနာအတျောမြားမြားလညျးပေးဖူးတယျ…သူက….ပွောရရငျ antacid and antiflatulent ပေါ့..antacid ဆိုတာက အစာအိမျထဲမှာ အကျဆဈတှအေရမျးမြားပွီးရငျပူ ၊အစာအိမျရောငျ ၊ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာတှဖွေဈတဲ့အခါ ခုနကပွောတဲ့ အစာအိမျထဲက acid တှကေို ခဖြေကျြပေးတာ…antiflatulent ဆိုတာကတော့…လပှေတာကို သကျသာစတော….ညက သမီးဖွဈနတောနဲ့ဆို ကှကျတိပဲလေ….ရငျပူတာရော လအေောငျ့တာရော.. နှဈခုလုံးတဈခါတညျးသကျသာသှားတယျမလား? ”
” မနကျ၁လုံး နလေ့ညျ၁လုံး ည၁လုံးနဲ့ ၃ရကျလောကျဆကျသောကျထား….နှဈပတျလောကျအခဉျြအစပျတှမေစားနဲ့ဦး…အစားလညျး အခြိနျမှနျမှနျလေးစား..လောလောဆယျတော့ အစာအရမျးမာတာတှမေစားနဲ့…အစားကို နညျးနညျး နညျးနညျးစီ ခဏခဏခှဲစား…..”
“ဟုတျကဲ့ ကိုကွီး ”
” ကောငျးသှားမှာပါ…ဗိုကျခဏခဏပွနျအောငျ့ရငျ…ဒါမှမဟုတျ ဗိုကျအောငျ့တာ ကွာနရေငျတော့ ဆေးခနျးပွရမယျ….တဈခုခုဆိုကိုကွီးကိုဖုနျးဆကျလိုကျ…ကိုကွီးဆေးခနျးခြိနျမဟုတျရငျ အိမျလာကွညျ့ပေးမယျ….ဆေးခနျးခြိနျနဲ့တိုကျနရေငျတော့ သမီးပဲလာခဲ့လိုကျလနေေျာ့ ”
“ဟုတျကဲ့ပါ ကိုကွီး….ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျရှငျ့ ”
” အရေးပေါ်ဖုန်း “
ဖုန်းမြည်သံကြောင့် ဒေါက်တာစိုးတစ်ယောက် လန့်နိုးသွားသည်။အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၂နာရီ၊ ဖုန်းခေါ်နေသူက ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်သူ မီ်းငယ်…..။ ရုတ်တရက်စိတ်ပူသွား..မျက်လုံးပင်ကျယ်သွားသည်။ ဟုတ်တယ်လေ…ဒီအချိန်ကြီး ဖုန်းခေါ်တယ်ဆိုတော့..ဘယ်သူများ ဘာများဖြစ်လဲပေါ့…။
” ဟယ်လို ကိုကြီးရေ…ကယ်ပါဦး… ”
” မီးငယ်…သမီး…ဘယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲ ?”
” ကိုကြီး…သမီးရင်ခေါင်းထဲက တအားပူနေလို့….လေပွသလိုကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်…ညနေတည်းကရင် ဖြစ်နေတာ…ခုပိုဆိုးလာပြီး အိပ်မရဖြစ်နေလို့ ”
” မေကြီးနဲ့ဖေကြီးက ခရီးသွားနေလို့…လူကြီးမရှိတာနဲ့ ဆေးခနိးလည်းမသွားပြဖြစ်ဘူး…ဆေးကတော့ လျက်ဆားပဲစားထားတယ်..အစာမကျေဘူးထင်လို့…အဲ့ဒါလည်းမသက်သာပါဘူး ”
” အခြားရော..အန်တာ..ဝမ်းသွားတာ…ဖျားတာ…အခြားဘာဖြစ်သေးလဲ? ဘာတွေစားလဲ ဒီရက်ပိုင်း? အချဉ်အစပ် လမ်းဘေးစာတွေစားသေးလား?အစားမမှန်တာမျိုးရော ”
” အဲ့လိုတွေတော့မဖြစ်ဘူးကိုကြီး….ဒီရက်ပိုင်း အပြင်စာတွေတော့မစားဘူး။စာမေးပွဲရှိလို့ စာကျက်ရင်း အိပ်ချင်ပြေအောင် သရက်သီးနဲ့အစပ်တွေတော့စားလိုက်မိတယ်…ထမင်းတော့သိပ်မစားဖြစ်ဘူး”
” အင်း…ကြည့်ရတာ အစာအိမ်ရောင်တာဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်…ကိုကြီး အဘွားအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဆေးသေတ္တာလေး သိတယ်မလား? အဲ့ထဲမှာ Kremil – S ပန်းရောင်ရှိတယ်။ အဲ့ဒါလေး ၂လုံးလောက်ဝါးစားလိုက်…”
” ဝါးစားရမှာလား? ”
” ဝါးစားတာပိုကောင်းတယ်…မခါးဘူး…ချိုချိုလေးပဲ…။အဲ့ဒါသောက်ပြီး ခဏနေရင် သက်သာသွားလိမ့်မယ်…မသက်သာရင် ဖုန်းပြန်ဆက်လာ…. ကိုကြီးလာခဲ့မယ်…ဟုတ်ပြီလား? ”
ဖုန်းချသွားပြီးတည်းက မနက်ထိ ဖုန်းထပ်မခေါ်လာပုံထောက်ရင်..သက်သာသွားပြီထင့် ။ဖုန်းတော့ ဆက်ကြည့်ဦးမှ…
“ဟဲလို ကိုကြီး ”
“ဟုတ် ကိုကြီး…ကိုကြီးပြောသလို Kremil-S ပန်းရောင် ၂လုံးဝါးစားလိုက်တယ်..အဲ့ဒါပြီး ခနနေတော့ အတော်လေးသက်သာသွားပြီး အိပ်ပျော်သွားတာ…အဲ့ဆေးက ဘာတွေပါတာလဲကိုကြီး…တော်တော်ကောင်းတယ်နော်…ခါးလည်းမခါးဘူး….ချိုချိုလေးရယ်…”
” ဟုတ်ပ…အဲ့ Kremil S ပန်းရောင်က အတော်လေးကောင်းတယ်…ကိုကြီးကိုယ်တိုင်လည်း သောက်ဖူးတယ်..လူနာအတော်များများလည်းပေးဖူးတယ်…သူက….ပြောရရင် antacid and antiflatulent ပေါ့..antacid ဆိုတာက အစာအိမ်ထဲမှာ အက်ဆစ်တွေအရမ်းများပြီးရင်ပူ ၊အစာအိမ်ရောင် ၊ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာတွေဖြစ်တဲ့အခါ ခုနကပြောတဲ့ အစာအိမ်ထဲက acid တွေကို ချေဖျက်ပေးတာ…antiflatulent ဆိုတာကတော့…လေပွတာကို သက်သာစေတာ….ညက သမီးဖြစ်နေတာနဲ့ဆို ကွက်တိပဲလေ….ရင်ပူတာရော လေအောင့်တာရော.. နှစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းသက်သာသွားတယ်မလား? ”
” မနက်၁လုံး နေ့လည်၁လုံး ည၁လုံးနဲ့ ၃ရက်လောက်ဆက်သောက်ထား….နှစ်ပတ်လောက်အချဉ်အစပ်တွေမစားနဲ့ဦး…အစားလည်း အချိန်မှန်မှန်လေးစား..လောလောဆယ်တော့ အစာအရမ်းမာတာတွေမစားနဲ့…အစားကို နည်းနည်း နည်းနည်းစီ ခဏခဏခွဲစား…..”
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး ”
” ကောင်းသွားမှာပါ…ဗိုက်ခဏခဏပြန်အောင့်ရင်…ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်အောင့်တာ ကြာနေရင်တော့ ဆေးခန်းပြရမယ်….တစ်ခုခုဆိုကိုကြီးကိုဖုန်းဆက်လိုက်…ကိုကြီးဆေးခန်းချိန်မဟုတ်ရင် အိမ်လာကြည့်ပေးမယ်….ဆေးခန်းချိန်နဲ့တိုက်နေရင်တော့ သမီးပဲလာခဲ့လိုက်လေနော့် ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကြီး….ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် ”
ပိုင်နီမေ (ဆေး ၂)